Ihe ngosi LCD kacha mma maka Arduino | Akụrụngwa n'efu
Ọrụ ndị metụtara Arduino bụ ndị ama ama na, dịka o mere na Raspberry Pi, ọ bụ otu n'ime ọrụ eji arụ ọrụ akụrụngwa akụrụngwa kachasị n'etiti ụlọ ọrụ. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji kwuo maka ya otu n'ime ngwakọta ewu ewu n'etiti ndị ọrụ Arduino: LCD + Arduino.
Ihe ngosi LCD bụ ngwa na-abawanye ma nweta nnweta, nke na - eme ka ọ bụrụ nnukwu nhọrọ iji soro anyị Arduino board. Ma Enwere ike iji ihe ngosi LCD ya na bọọdụ Arduino anyị? Kedu oru enwere ike iji LCD na Arduino mee ihe, nchikota a kwesiri ka eji ya?
1 Kedu ihe bụ LCD?
2 Kedu ụdị ụdị lcd dị iche iche enwere?
3 Kedu ụdị ndị kachasị ewu ewu?
4 Etu esi ejikọ ihuenyo LCD na Arduino?
5 Ọ bụ ihe amamihe iji LCD ihuenyo maka oru ngo anyị?
Kedu ihe bụ LCD?
Ndị ọrụ novice amaghị ihe LCD pụtara, n'agbanyeghị na ha ga-ahụrịrị ya karịa otu oge na ndụ ha. LCD na-anọchi anya Liquid Crystal Display, ma ọ bụ ihe ga - abụ Liquid Crystal Display. Obere ma ọ bụ nnukwu ihuenyo nke ọtụtụ n'ime anyị maara na ngwaọrụ dị iche iche dịka elekere mkpuchi, elekere elekere, ihe mgbako, wdg ... Ngwaọrụ eletriki na-adịghị agwụ agwụ nke gbasaa site na ngwakọta nke LCD + Arduino na Free Hardware.
Igwe LCD dakọtara na ngwanrọ Free ọ bụla, gụnyere Arduino Project boards, ọ bụ ezie na ha chọrọ ka mbadamba nwere ụfọdụ njikọta ma ọ bụ atụdo ka njikọ n'etiti kọmputa ngwá na LCD ihuenyo.
Nke a bụ isi, ọ dịghị nsogbu na-eji dị iche iche LCD ihuenyo nha. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, otu ụlọ ọrụ Arduino nwere ike iji 5-inch, 20 "LCD ihuenyo ma ọ bụ akara ngosi 5 × 2, iji kwuo obere nha. Mana anyi aghaghi ima nke a Arduino osisi abụghị otu ihe eserese kaadị ma ọ bụ motherboard, ya mere ozi a ga egosiputa na ihuenyo agaghị arụ ọrụ otu na obere enyo dị ka nnukwu ihuenyo, ọ bụrụhaala na ọ bụ otu ụlọ ọrụ Arduino.
Ntụtụ ndị anyị ga-achọ na bọọdụ Arduino iji jikọọ na ihuenyo LCD ga-abụ ihe ndị a:
GND na VCC
Ntụtụ D0 na D7
Abụọ atụdo maka Backlight
Ọ bụrụ na ị nwere oke atụdo na atụdo dakọtara na n'elu, LCD ga-arụ ọrụ nke ọma na bọọdụ Arduino. N'ihi ya, ọ bụ ihe amamihe dị na-elele atụdo nke ma ngwaọrụ iji jide n'aka na njikọ dị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ dị obere maka ụlọ Arduino nke na-enweghị ike ijikọ na ngosi LCD ma ọ bụrụ na ọnọdụ dị otú ahụ, enwere LCD modulu dị iche iche n'ahịa nke jikọrọ Arduino n'ụzọ dị mfe ma ọnụ ahịa ya dị oke ọnụ.
Kedu ụdị ụdị lcd dị iche iche enwere?
Anyị na - achọta ụdị lcd atọ na ahịa:
Lcd site na isi.
Ihe ngosi TFT.
El Line LCD bụ ụdị ihuenyo na-egosi ozi site na ahịrị. A na-etinye ozi n'ime ahịrị ma anyị enweghị ike ịpụ na etiti ahụ. Typedị LCD a bụ ihe eji eme ihe, akụ na ụba na ama ama mana ọ bụkwa ụdị lcd na-enye egwuregwu pere mpe, ebe ọ bụ ọ na-egosi naanị ụfọdụ ozi ma ọ na-abụkarị ederede.
El dotted lcd Ọ na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụdị lcd gara aga, mana n'adịghị ka nke gara aga, na na lcd site na isi anyị nwere matriks nke isi. N'ihi ya, n'ụdị lcd a, anyị nwere ike idowe ederede na ọbụlagodi onyonyo ebe ọ bụla na lcd ihuenyo. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike inwe ọtụtụ font nha n'ime otu lcd ihuenyo, ihe na-anaghị eme na lcd ngosipụta nke ahịrị, ndị nha ha ga-abụrịrị otu.
El Ngosipụta OLED Ọ bụ maka ọtụtụ ụdị nke ngosipụta nke onwe ya maka ndị ọzọ ọ dị n'ime ụdị lcd. Ngosipụta OLED bụ ihuenyo na-egosi anyị ozi mana iwu ya dị iche na nke LCD ihuenyo kemgbe eji ada diodes na organic mmiri maka ya kere eke. N'adịghị ka ụdị ndị gara aga, ngosi OLED na-enye mkpebi dị elu, agba na obere oriri ike. Dị ka ihe nlere kọmputa ma ọ bụ ntụpọ lcd, OLED ihuenyo na-eji matrik nke ntụpọ ma ọ bụ pikselụ (ebe ọ bụ na anyị nwere ike iji ọtụtụ agba na otu ngosipụta) iji gosipụta ọdịnaya.
El Ikanam ma ọ bụ LCD Led ngosi yiri OLED Display, ma ada diodes adịghị nwere organic ọcha. Omume ya adịghị elu dị ka ngosi OLED mana ọ na-enye mkpebi karịa akara ngosi LCD ntụpọ ma na-enye agba.
El Ihe ngosi TFT bụ ụdị lcd kachasị ọhụrụ na ahịa. Anyị nwere ike ịsị na ihe ngosi TFT na-eji pikselụ dị ka ihe nlele kọmputa ma ọ bụ telivishọn na anyị nwere ike ịpụta ụdị ozi ọ bụla site na ngebichi ndị a. Ike oriri ya dị elu karịa ụdị nke ọ bụla gara aga ya mere eji obere nha. Ogo nke ngosipụta ndị a tụrụ na sentimita asatọ n'adịghị ka ụfọdụ ụdị ngosi ndị ọzọ. A na-eji ihe odide ma ọ bụ nha ihuenyo tụọ ha
Kedu ụdị ndị kachasị ewu ewu?
Ekele maka azụmahịa n'ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọtụtụ ụdị lcd ngosipụta, mana ọ bụ naanị ole na ole bụ ndị kachasị ewu ewu. Ihe a ma ama bu nnweta ya di mfe, onu ahia ya, oru ya ma obu ihe di nma.. N'ebe a, anyị na-ekwu maka ụdị ndị a:
Ngosipụta a sitere na ekwentị mkpanaaka Nokia 5110 ochie. LCD nke mobiles ndị a karịrị nke ekwentị na ụlọ ọrụ ahụ gara n'ihu na-ere ihe ngosi a maka ojiji ya. Ihuenyo bụ monochrome na ụdị Lineas LCD. Ihe ngosi Nokia 5110 na-enye ahịrị 48 na ogidi 84. Ike ya dị ukwuu nke na ọ na-enye ohere nke igosipụta ihe oyiyi ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ọma. Ya arụmọrụ dị ezigbo mma n'agbanyeghị ọ ga-adị anyị mkpa iji ọkụ azụ azụ iji nwee ike ịlele ihuenyo ahụ n'ụzọ ziri ezi, na mkpokọta ọ na-esokarị ọkụ ọkụ a ọ bụ ezie na enwere ike ịnwe modulu na-enweghị ọrụ a. Ngosipụta ahụ na-eji ọkwọ ụgbọ ala Philips PCD8544. Enwere ike ihu Nokia 5110 LCD ihu igwe na ụlọ ahịa maka euro 1,8.
Ihe ngosi ahụ Hitachi HD44780 LCD Ọ bụ modul nke onye nrụpụta Hitachi mepụtara. The lcd panel bụ monochrome na bụ akara ụdị. Anyị nwere ike ịchọta a nlereanya na 2 ahịrị 16 odide ọ bụla na ihe nlereanya ọzọ na 4 ahịrị nke 20 odide ọ bụla. Anyị na-ahụta ngosipụta Hitachi HD44780 LCD na ụlọ ahịa ọ bụla mana ọ nwekwara ike ịbụ na anyị na-ahụ Hitachi HD44780 njikwa na-enweghị ihuenyo, ọnụahịa nwere ike inyere anyị aka n'ọnọdụ a, ọnụ ahịa bụ ihuenyo tinyere njikwa maka euro 1,70 na ọ bụ naanị onye ọkwọ ụgbọ ala 0,6.
Ihe ngosi lcd a bụ ụdị OLED. I2C OLED LCD bụ ihuenyo OLED monochrome nke nwere anụ ọhịa nke na-ejikọ na Arduino site na usoro I2C., usoro iwu a na-eji bọs bidirectional nke na-enye anyị ohere ịchekwa atụdo, ịbụ ihe dị mkpa ntụtụ anọ n'ihu ndị dị mkpa ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Onye na-anya maka ihe ngosi LCD a bụ ọnyà ka anyị wee nwee ike iji ọba akwụkwọ n'efu maka ojiji ya. Ofgwọ nke ihe nlere a abụghị ihe dị ọnụ ala dịka ụdị ndị gara aga mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ọnụ site na ọtụtụ ndị ọrụ, anyị nwere ike chọta maka 10 euro otu.
E-Ink LCD ihuenyo na-eji ink kọmputa iji gosipụta ozi. Dị ka ụdị ndị ọzọ, na-eji usoro I2C ekwurịta okwu na Arduino. Ihe ngebichi ahụ bụ nke ụdị TFT ma jiri ink kọmputa nke na-eme ka oriri dị ala ma na-enweghị mkpebi ọ bụla. Ọ bụ ezie na enweghi mpempe akwụkwọ agba (n'oge ahụ), ha niile bụ na oji na agba ntụ.
Dị ka ọchịchọ ịmata ihe nlereanya a nke lcd screens, anyị ga-ekwu na ọnụahịa na nha dị n'otu. Anyị nwere ike chọta nha dịgasị iche na ibu nha, ka ọ na-enyo enyo karịa. Yabụ, 1 ma ọ bụ 2,5 inch E-Ink screens Ha nwere ego nke 25 euro kwa otu. Panels ndị buru ibu karịa nwere ike iru otu puku euro n'otu nkeji.
Etu esi ejikọ ihuenyo LCD na Arduino?
Njikọ dị n'etiti ihuenyo LCD na Arduino dị mfe. Na ntọala anyị ga-eso ntụtụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu wee jikọọ ha na bọọdụ Arduino. Eserese njikọ a ga-abụ ihe ndị a:
Mana ọ bụghị naanị ihe anyị nwere ike iburu n'uche iji jikọọ ihuenyo LCD na Arduino. Kedu ihe ọzọ anyị kwesịrị iji ọ́bá akwụkwọ nke ga-enyere anyị aka inye mmemme anyị mepụtara koodu dị mkpa iji mee ka ọ rụọ ọrụ n'ụzọ ziri ezi na ihuenyo. Lọ ahịa akwụkwọ a a na-akpọ ya LiquidCrystal.h enwere ike inweta ya n'efu site na Ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị Arduino. A ga-eji ọbá akwụkwọ a mee ihe dị ka ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, na-akpọku ya na mmalite nke koodu ahụ:
Zọ dị mfe na ngwa ngwa maka bọọdụ Arduino iji rụọ ọrụ na ihuenyo LCD.
Ọ bụ ihe amamihe iji LCD ihuenyo maka oru ngo anyị?
N'ịga n'ihu n'elu, anyị kwesịrị ịjụ onwe anyị ma ọ bụrụ n'ezie na ọ ga-adaba adaba ịnweta ihuenyo LCD na Arduino maka ọrụ ma ọ bụ ọrụ anyị. Onwe m, echere m na maka ụfọdụ ọrụ ọ dị mkpa na maka ndị ọzọ ọ bụ ihe gbasara onwe gị karịa ka ọ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike ikwu maka ụdị ndị kachasị ọhụrụ nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D, ụdị ndị na-agbakwunye naanị n'ọnọdụ LCD na ihe ọ bụla ọzọ, mana ọnụahịa nke ihe nlereanya ahụ dị oke ọnụ.
N'okwu ndị a, echeghị m na ọ dị mkpa iji ihe ngosi LCD, mana nke a abụghị ikpe na ụfọdụ ọrụ ebe ngosi LCD dị ezigbo mkpa. Ihe omuma atu nke nke ikpeazu bu oru dika nche, ihe egwuregwu ma obu ihe nchoputa GPS. Ihe na kwesịrị inwe ihe osise eserese iji rụọ ọrụ nke ọma. Ihe anyị na-ekwu nwere ike ịbụ nzuzu, ọkachasị maka ndị ọkacha mara ọkachamara, mana akụrụngwa nwere ike ime ka ọrụ ọ bụla dị oke ọnụ ma ọbụnadị ịme ya enweghị ike iwepụ. N'ihi ya, ọ dị mkpa iji nyochaa ma ọrụ anyị kwesịrị inwe ihuenyo LCD ma ọ bụ na ọ bụghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Ihuenyo LCD na Arduino
Otu esi emepụta akpaaka ụlọ site na nkwụsị